सेतो पुतलीको झुसले ६ को दृष्टि गुम्यो
पोखराः साँझपख वत्तिको उज्यालोमा सेतो पुतलीहरु झुम्मिएको दृश्य अहिले धेरैतिर देखिन्छ । यस्ता पुतलीहरु हेर्दा सामान्य लागेपनि स्वास्थ्य बिशेष गरी आँखाका लागि यो निकै घातक सावित भएका छन । आँखा र शरीरको अन्य भागमा छोएमा चिलाउने, रातो हुने मात्रै होईन, आँखामा परेमा तत्काल उपचार नगरिएमाा दृष्टि गुम्न सक्छ ।
सेतो पुतली अर्थात् मोथको झुस आँखामा परेर हुने संक्रमणले सापु गराउँछ । गण्डकी प्रदेशका कास्की, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँलगायत जिल्लामा सापु रोगका बिरामी बढिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा ५५ जनामा सापु देखिएकोमा पाँचको दृष्टि गुमेको छ ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, लमजुङजस्ता जिल्लामा सापुको प्रभाव बढी देखिएको छ । हिमालय आँखा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. एलिया श्रेष्ठले यो सिजनमा मात्र सापुका ५५ बिरामी उपचारका लागि आएको जानकारी दिइन् । उपचारमा आएकामध्ये पाँचजनाको दृष्टि गुमेको छ । ‘यो सिजनमा सापुका ५५ बिरामी अस्पताल आइसकेका छन् । तीमध्ये पाँचजनाको दृष्टि फर्काउन सकिएन,’ डा. श्रेष्ठले भनिन् । उनका अनुसार हिमालय आँखा अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै बिरामी कास्कीबाट आएका छन् । त्यसैगरी, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ र लमजुङबाट पनि सापुका बिरामी उपचारका लागि आएका छन् ।
पूर्वीपहाडी जिल्ला संखुवासभामा १५ जनामा सापु रोग देखिएकोमा एकजनाले आँखाको ज्योति गुमाएका छन् । संखुवासभाका खाँदबारी नगरपालिका, चैनपुर नगरपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिकामा सापुका बिरामी भेटिएको तेजरत्न आँखा तथा कान उपचार केन्द्र खाँदबारीका इन्चार्ज क्षितिज बरालले जानकारी दिए । बरालका अनुसार खाँदबारीकी स्मृति घिमिरेले आँखाको ज्योति गुमाएकी हुन् ।
– सापु आँखाको निम्ति धेरै नै खतरनाक हो । सापु लागेपछि द्रुतगतिमा अगाडिको भागदेखि पछाडिको भागसम्म आँखाको पत्रहरू बिग्रन थाल्छन् । ४८ घन्टा कटेपछि आँखाको धेरैजसो भागमा पिप जम्छ । यसका लक्षण देखिएको घन्टा वा मिनेटभरमै उपचार खोज्नुपर्छ । आँखा पाकेको रोग हो भनेर हेलचेक्र्याइँ गर्दै बस्दा ४८ घन्टाभित्रमा आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने डर हुन्छ । तर, यो सरुवा रोग होइन ।
– यो रोग बाह्रै महिना देखिने होइन । विदेशी क्यालेन्डरअनुसार बिजोडा वर्ष र नेपाली क्यालेन्डरअनुसार जोडी वर्षमा भदौदेखि मंसिरसम्मको समयमा यो रोग देखा पर्दै आइरहेको छ । खासगरी वर्षायाम रोकिएर चिसो बढ्नै लाग्दा देखिन्छ ।
– यो रोग बालबालिकामा धेरै छ । पीडितमध्ये ६०/७० प्रतिशत बालबालिका छन् ।
– पहिले–पहिले यो रोग लागेका दुईतिहाइको दृष्टि गुम्थ्यो, तर अहिले उपचारमा धेरै सुधार आएको छ । हालसम्मको उपचार पद्धति र निको भएको दरलाई हेर्दा लगभग ७० प्रतिशतको आँखाको दृष्टि फर्काउन सकिएको छ ।